Inona no atao hoe endrika brutalist?: endri-javatra lehibe sy fiasa | Famoronana an-tserasera
Misy ny endrika izay refesina amin'ny psikolojia abstract, misy ny hafa refesina amin'ny fandrafetana tsara sy fizarana singa grafika. Misy ihany koa ireo izay, etsy ankilany, dia mirona amin'ny firoboroboana be noho ny tsy fifandanjana aseho eo amin'ny sehatra.
Nandritra ny am-polony taona maro, ny famolavolana dia iray amin'ireo fironana ara-javakanto voatsikera indrindra. Ity trangan-javatra ity dia nahatonga ny mpamorona maro haka ho azy famolavolana tanteraka na anti-design tanteraka. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehontsika anao ny iray amin'ireo tondra-drano hafa izay tsy fantatrao ary feno endrika, loko ary fomba fiteny izay tsy azon'ny rehetra.
1 Brutalist Design: inona moa izany?
2.1 Taona maro taty aoriana
3 Famolavolana brutalista amin'ny vanim-potoana nomerika
3.1 Brutalism: amin'izao fotoana izao
4 Brutalism sy famolavolana sary
5 Mpamorona na mpanakanto
Brutalist Design: inona moa izany?
Ny endrika brutalist na antsoina koa hoe herisetra, dia faritana ho karazana hetsika ara-estety ary misy fiasa sasany ary mahafeno ny andrasana, noho izany ny anarana ary nofaritana ho utilitarian ihany koa.
Mba hahatakaranao bebe kokoa an'io ankehitriny somary hafahafa io, ny tena tanjony dia ny hahazo fijery manohitra ny haingon-trano amin'ny endrika ary mampiseho sy maneho ny tenany ho tombontsoan'ny akora ampiasaina amin'ny fanamboarana ireo endrika. Ary azo antoka fa hanontany tena ianao hoe ahoana no fomba nananany laza bebe kokoa, satria Azo antoka fa tao amin'ny maritrano tamin'ny taona 1950 ka hatramin'ny 1970 izany. Ny tsy fantatry ny vitsy dia ny hoe nipoitra avy ao anaty atiny izy izao ary niparitaka tamin'ny sehatry ny famolavolana nomerika maoderina.
Ary nahoana izy io no omena lanja be amin’izao andro izao?Eny, iray amin’ireo riandrano izay tena nahasarika ny sain’ny mpijery azy. Mampiharihary ny zavatra ilaina mba hahay hanavaka ny tenany amin'ny sisa sy izay mahatonga azy ho fomba mangatsiaka sy mafy.
Ny toetran'ny herisetra dia matetika hita maso, io zava-misy io dia mahatonga azy io ho fomba hafa ary sarotra ny mampifanaraka azy. Tsy toy ny hafa, ny onjam-peo ara-javakanto dia niseho araka ny teo alohany. Amin'ny habibiana dia mandalo amin'ny fomba iray mankany amin'ny iray hafa izy ireo. Andao atomboka:
Ny fampirantiana ny fitaovana: manana ny fombany manokana, dia ny architecture, ary tsy misy ifandraisany amin'ny media an-tserasera.
Mampiasa tonony monochromatic izy ireo izay avy amin'ny volondavenona, fotsy ary mainty.
Izy io dia faritana ho fomba fiasa sy tsy feno na miboridana satria ny famolavolana sy ny zavakanto ary ny tsara tarehy dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra.
Ny singa modular sy ny famerimberenan'izy ireo dia tena zava-dehibe.
Mazàna no atambatra miaraka amin'ny sisiny mahitsizoro ny tapany. Ankoatr'izay, ireo singa ireo dia tsy ovaina na amboarina.
Ny tantaran'ity ankehitriny hafahafa ity dia aleo lazaina izany manomboka amin'ny fandringanana, ho azy ireo isika dia ao amin'ny 1940s ary niaraka tamin’izany, ny fiafaran’ny Ady Lehibe II. Nandritra io vanim-potoana io, maro amin'ireo tranobe any Angletera no mandainga ary toa rava tanteraka sy rava.
Ny firenena amin'ny ankapobeny dia mila manangana ny loza lehibe, saingy tsy maintsy manao izany haingana araka izay tratra izy ireo satria mila manome trano ho an'ny mpiara-belona aminy sy tranom-panjakana izy ireo izay ahafahan'izy ireo mandamina ny firenena izay efa rava tanteraka, amin'izany rehetra izany. tafiditra ihany koa ny tsy fahampian'ny akora.
Any amin'ny toerana hafa no ahitantsika ny Firaisana Sovietika, firenena iray feno modely sy fanorenana trano. Ho azy, dia miomana ny hanorina ny fomba prefabricated trano izay antsoina hoe Khrushchyovka, trano sasany vita amin'ny fitaovana mora vidy ary mitovy amin'ny modely teo aloha. Ity fomba maritrano ity dia mikendry ny hiala amin'ny bourgeoisie sy ny haitraitra ary maneho ny fitoviana ara-tsosialy kominista.
Ity fomba ity dia niparitaka indray tany Royaume-Uni, namorona tranobe toy ny Sekoly Hunstanton, Smithson Square ao amin'ny tanànan'i Westminster, ny Balfron Tower ary ny National Theatre. Ary koa any amin'ny tontolo hafa miaraka amin'ny Alumni Memorial Hall ao amin'ny Illinois Institute of Technology, ny Perth Concert Hall any Australia, ny Robarts Library any Toronto.
Toy izany no nahaterahan'ity hetsika ity.
Taona maro taty aoriana
Ny lazan'ity fomba vaovao ity dia nitondra vokany lehibe, anisan'izany ny fitondrana tsy refesi-mandidy. Izany hoe, ny fampiasana fitaovana sy loharanon-karena toy ny canvases monochrome lehibe dia nahatonga ity zotra ity ho tsy misy loko sy manaitra.
Ny fiafaran'ity hetsika ity dia tonga tamin'ny taona 70., nefa mandraka androany dia namela tsangambato ara-tantara lehibe mahaliana miparitaka eran-tany.
Famolavolana brutalista amin'ny vanim-potoana nomerika
Loharano: Design Shack
Taona maro taorian'ny fiafaran'ny famolavolana brutalism amin'ny famolavolana maritrano, dia nampidirina ny lafiny na fitaovana vaovao, ny vanim-potoana nomerika. Miaraka amin'ny fivoarana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia, ity ankehitriny ity dia misy amin'ny fifandraisana nomerika.
Amin'izao fotoana izao, ity hetsika ity, nampidirina tamin'ny vanim-potoana nomerika, dia niala tamin'ny fitaovana ara-batana na tsy misy dikany ary nitazona fakany avy amin'ny maha-azo itokiana sy ny fanorenana mahomby kokoa.
Ny herisetra amin'ny famolavolana tranonkala dia niasa foana. Iray amin'ireo tranonkala miverimberina indrindra ny Craigslist malaza. Ny tsy fantatry ny mpamorona maro dia rehefa mampiasa loharano tsotra sy mahasoa izy ireo dia mifantoka amin'io fomba io amin'ny tetikasany sy ny asany.
Ny endri-javatra raha oharina amin'ny fomba maritrano dia tena nambara tamin'ny typography sy amin'ny safidy loko samihafa. Tsy toy ny teo aloha fa tsy monochromatic intsony.
Brutalism: amin'izao fotoana izao
Amin'izao fotoana izao, niverina tany amin'ny fototry ny maritrano ny herisetra. Amin'ny vanim-potoana nomerika, azo atao ny mijery efijery tsy misy na inona na inona izay afenina ny loko sy ny loko. Esorina avokoa ny fanovana rehetra ary aseho ny endri-tsoratra nomerika sy ny sary efamira.
Brutalism sy famolavolana sary
Ny brutalism amin'ny famolavolana sary dia tonga noho ny nialoha azy, Fomba Swiss na antsoina koa hoe fomba iraisam-pirenena. Fomba iray tena nisongadina tamin'ny taona 50. Ity fomba ity dia fantatra amin'ny maha-objectivity sy ny rationalism amin'ny famolavolana azy. Noho izany, nanatona lafin-javatra manan-danja kokoa izy ireo ary niala tamin'ny zavakanto.
Izany no antony nanomezana lanja be ny fifanoherana typografika sy andalana voalamina, ankoatra ny fampiasana ny endrika geometrika tsotra sy boribory, litera matevina, écran halftone, sarin'ny habaka sy ny firafitry ny fitaovana avy amin'ny maritrano.
Mpamorona na mpanakanto
Loharano: thomas danthony
Mpamorona sary sy mpanao sary teraka tany Frantsa izy saingy mipetraka any Londres. Hatramin'ny nahazoany ny loka Handsome Future, dia tonga nanaporofo izy fa iray amin'ireo mpanao sary nampanantenaina sy manan-talenta indrindra. Ny mpanjifany no mahery indrindra: M&C Saatchi, Microsoft, Nokia ary Little White Lies. Anisan'ny endrika endrika feno herisetra izy io ary mitazona ny fakan'ny fomba Soisa noho ny endrika geometrika.
Matetika ny sanganasany no mirakitra fitantarana nohatsaraina tamin'ny alalan'ny fampiasàna mazava tsara izay ahafahan'ny sary mitantara tantara ary mampieritreritra ny mpijery.
Ernst Keller dia teraka tamin'ny 1891 tany Aarau, Soisa. Nianatra zavakanto sy literatiora izy ary nandritra ny asany tamin'ny maha mpamorona azy dia namorona afisy ho an'ny Kunstgewerbemuseum izy an'i Zurich, ho an'ny asa soa isan-karazany sy famantarana famantarana famantarana maro.
Ny asany amin'ny maha-mpamorona azy dia tena sarobidy amin'ny typography sy ny famolavolana sary amin'ny architecture. Saingy, raha i Ernst Keller no fototra amin'ny zavatra iray, dia noho ny asany amin'ny maha-mpampianatra azy sy ny fitaomana tsy mampino nananany tamin'ireo mpianany maro.
Nanomboka nampianatra ny famolavolana sy ny typography tao amin'ny Kunstgewerbeschule (Sekolin'ny Zavakanto Applied) malaza any Zurich i Keller tamin'ny 1918. Tao izy dia nanohy hatramin'ny fisotroan-drononony tamin'ny 1956, taorian'ny am-polony taona maro nampianatra ireo mpamorona tanora namolavola ny fomba Soisa nandritra ny taona 50. Ernst Keller dia heverina ho rain'ny fomba Soisa, fantatra tatỳ aoriana hoe International Typographic Style.
Izany dia noho ny hamaroan'ny mpianatr'i Keller izay namolavola sy nalaza ity fomba famolavolana ity. Mitana anjara toerana lehibe ny fandraisan'i Ernst Keller amin'ny fampivoarana ny foto-kevitra fampianarana vaovao amin'ny fiofanana amin'ny famolavolana. Raha ny marina dia izy no namorona ny iray amin'ireo programa fanofanana rafitra voalohany ho an'ny famolavolana sary eto amin'izao tontolo izao.
Ny taona maro nampianarany teo anelanelan'ny 1918 sy 1956 dia niteraka mpamorona tena samy hafa. Anisan'izany ireo mpandray anjara amin'ny famolavolana sary vaovao toa an'i Richard Paul Lohse, Josef Müller-Brockmann sy Carlo Vivarelli na talenta isan-karazany amin'ny fanoharana ara-javakanto toa an'i Heiri Steiner, Lora Lamm na K. Domenic Geissbühler, ary ireo mpamorona vaovao toa an'i Hermann Eidenbenz na Gérard Miedinger .
Izy dia iray amin'ireo mpanakanto feno sy mahay indrindra amin'izao androntsika izao. Ekena ho manam-pahaizana manerantany, niasa ho mpanao mari-trano, mpanao hosodoko, mpanao sary sokitra, mpamorona, mpampianatra ary mpanao politika izy, ankoatra ny zavatra hafa. Nandritra ny androm-piainany dia niray hina ny taranja rehetra, tsy nisy fisarahana mazava teo amin'ny zavakanto sy ny asa hafa, ny zava-drehetra dia tao anatin'ny hevitra iray manerantany.
Teraka tamin’ny 1908 tany Winterthur, tanàna sarangan’ny mpiasa any akaikin’i Zurich, izy, ary tany no nandehanany nianatra tao amin’ny Sekoly asa tanana. talohan'ny nanombohany ny fianarany tao amin'ny 1927 tao amin'ny Bauhaus, izay nampianatra ny tarehimarika mitovy amin'i Vasili Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers, László Moholy-Nagy ary Walter Gropius. Nijanona roa taona tany Dessau i Bill, ary nandritra izany no nandraisany ny fampianaran'ny sekoly, ary namaritra ny tsipika ankapobeny amin'ny asany.
Raha tonga lavitra ianao dia manantena aho fa nianatra tamin'ity famintinana nasehonay anao ity ianao. Ary inona no tianao kokoa momba ny maritrano sa momba ny vanim-potoana nomerika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe brutalist design?